Izindaba - Ungawenza kanjani amazinyo abe mhlophe, u-Gigi Lai kanye nendlela ekhethekile ka-Zhong Jiaxin yokwenza amazinyo abe mhlophe
Indlela yokwenza amazinyo abe mhlophe, u-Gigi Lai kanye nendlela ekhethekile ka-Zhong Jiaxin yokwenza amazinyo abe mhlophe
U-Gigi Lai akalokothi avilapha uma kuziwa ekuvikelweni kwamazinyo. Wabelana ngamathiphu akhe okwenza amazinyo abe mhlophe kufilimu ngaphambili, ethi wazalwa enamazinyo amahle futhi wayengakaze athole ukwelashwa kwamazinyo iminyaka eminingi. Umbala wamazinyo ungokwemvelo. Noma kunjalo, ukholelwa ukuthi Umsebenzi onzima wosuku lwakusasa awunakushaywa indiva. Usabheka ukubaluleka kokunakekelwa kwamazinyo. Nawa amathiphu akhe angu-5 okwenza amazinyo abe mhlophe. UGigi Lai uveze ukuthi uzoxubha amazinyo ekuseni nakusihlwa nsuku zonke. Uma izimo zivuma, uzophinde axubhe amazinyo ngemva kwesidlo sasemini ukuze abeke isisekelo esiqinile samazinyo anempilo.
Indlela ka-Gigi Lai yokwenza amazinyo abe mhlophe 1. Geza amazinyo akho ngokunyakazisa isiyingi ngesixubho sikagesi
Ukuxubha amazinyo ekuseni, ntambama nakusihlwa kubalulekile, kodwa inqubo yokuxubha nayo iyingxenye ebalulekile. U-Gigi Lai ukholelwa ukuthi ukuxubha amazinyo kufanele kube "ukuxubha okuyindilinga" ukuze kuhlanzeke wonke amagumbi amazinyo ngempumelelo, futhi kungabhucabhula izinsini. Zama ukugwema ukuxubha amazinyo phezulu naphansi, ngoba kulula ukulimaza izinsini zakho. Uma ungemuhle ekuxubeni amazinyo akho ngokunyakazisa isiyingi, ungasebenzisa umsizi wesixubho sikagesi.
Indlela ka-Gigi Lai yokwenza amazinyo abe mhlophe 2. Khetha umuthi wokuxubha omelene nokwaliwa
Lapho ekhetha imikhiqizo yokunakekelwa ngomlomo, u-Gigi Lai uzophinde ahlole kuqala izidingo nezimo zamazinyo akhe. Ngokwesibonelo, lapho izinsini sezizwela kakhulu, uzokhetha imithi yokuxubha enamazinyo apholile noma alwa nokungezwani komzimba ukuze kunzinziswe imizwa yezinyo futhi anciphise ukuzwela nokuba buhlungu kwamazinyo .
Indlela ka-Gigi Gigi yokwenza amazinyo abe mhlophe 3. Hlanza ulimi olunamathelayo
Ngaphezu kwalokho, ukuhlanzwa kolimi akufanele kunganakwa. U-Gigi Lai uzosebenzisa induku yokuhlanganisa ulimi ukuze ahlanze ukunamathela kolimi ngemva kokuxubha amazinyo. Lokhu akukwazi nje ukwandisa ukuzwela kokunambitha, kodwa futhi kuvimbele ukubola kwamazinyo, i-dental plaque noma ezinye izifo zezinsini. Indlela Ka-Gigi Lai Yokucwenga Amazinyo 5. Sebenzisa Iziqephu Zokucwenga Amazinyo Maviki Onke. UGigi Lai wathi uzosebenzisa isichibi esiba mhlophe kanye ngesonto isigamu sehora isikhathi ngasinye. Akukhona nje kuphela ukuthi kulula ukuyisebenzisa, intengo iyathengeka, futhi umphumela ubaluleke kakhulu.
Ikhithi ye-Led yokucwenga amazinyo, I-Ismile Home Teeth Whitening Kit Gel Led Light, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, Ikhithi Yokwenza Amazinyo Amhlophe, Amazinyo Amhlophe Ijeli kanye namathileyi, Ukugcwalisa Ijeli Elimhlophe Amazinyo,